Kenya oo 100 weerar kala kulantay Alshabab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wargeyska The Standard ee kazoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dalkaas la kulmay ilaa 100 weerar oo kaga yimid Alshabaab-ka ku xiran Alqaacidda tan iyo sandkii 2011.
Ugu yaraan 370 oo rayid ah ayaa la dilay 1,075 kalana waa la dhaawacay wixii ka dambeeyey October, 2011 xiligaas oo Kenya bilowday howlgal ka dhan Alshabaab, looguna magacadaray Linda Nchi.
Howlkaas ayaa keenay in ciidamada Kenya oo ku andacoonaya iney Alshabaab baacsanayaan gudaha usoo galaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Jubada Hoose iyo Gedo, waxaana ilaa hadda dagaal kula jira Alshabaab.
100-ka weerar ee wargeyska The Standard sheegay ka kala dhacay Nairobi, Mombasa, Lamu, Mandera, Wajeer, Gaarisa iyo meelo kale.
Khasaaraha ugu badan wuxuu ka dhashay weerarkii Westgate ee bishii September 2013 Alshabaab ku qaadday xaruntaas ganacsi oo ku taalla Naiorbi, waxaana ku dhintay ilaa 68 qof, 175 kalana waa lagu dhaawacay.
Waxaa kale oo khasaare badnaa weeraro is xigxigay oo sanadkaan 2014 ka dhacay deegaano hooyimaada degmada Lamu ee gobolka Xeebta Kenya, waxaana weeradaas lagu dilay ilaa 100 Kenyan ah.
Kenya ayaa waxaa sidoo kale dagaalka Soomaaliya ka heysta culeys dhaqaale iyadoo ku bixisa lacaga dhan Sh26 billion. Alshabaab ayaa horay dhowr jeeru ugu hanjabay iney afka ciida u dari doonaan dhaqaalaha iyo awoodda ciidan ee Kenya.
Mareykanka oo sii xoojinaya duqeynta dowladda Islaamiga ah